Fanekem-pinoana : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Fanekem-pinoana : Fahasamihafan'ny versiona roa
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Aprily 2018 à 12:45
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Aprily 2018 à 12:43 (hanova)
k (Nanisy zana-dohateny)
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Aprily 2018 à 12:45 (hanova) (esory)
k (Nandamina zana-dohateny)
==== Ny fanekem-pinoan'ny Kristiana voalohany ====
Ny fiangonana kristiana dia nanana fanekam-pinoana izay mamaritra ny maha kristiana na tsia ny olona iray. Ho an'ny Kristiana, ny fanekem-pinoana voalohany dia ny [[kerigma]], fanambaram-pinoan'ny Kristiana voalohany.
* ''I Jesosy Kristy no mesia zanak'Andriamanitra'';
* ''miantso ho amin'ny fibebahana izy.''
Ireto avy ireo fanekem-pinoana amin'izao fotoana izao dia ny fanekem-pinoan'nypinoana Apostolyapostolika sy ny fanekem-pinoan'i Nikea-Konstantinopla. Ny Fanekem-pinoana nikeana sy ny Fanekam-pinoana apostolika dia samy vokatr'ireo [[Konsily]] momba ny [[Trinite]], ka ireto avy izy ireo:▼
=== Ny fanekem-pinoana nateraky ny konsily momba ny Trinite ===
▲Ireto avy ireo fanekem-pinoana amin'izao fotoana izao dia ny fanekem-pinoan'ny Apostoly sy ny fanekem-pinoan'i Nikea-Konstantinopla. Ny Fanekem-pinoana nikeana sy ny Fanekam-pinoana apostolika dia samy vokatr'ireo [[Konsily]] momba ny [[Trinite]], ka ireto avy izy ireo:
==== Ny Fanekem-pinoana Nikeana ====
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/815098"